ओलीले कलंकको टिका लगाए, हामीलाई हिरो बनाईदिए - (भिडियो).... - Buletin Nepal
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ….नेकपा…. को प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर संविधानमाथि गरेको प्रहार सैह्य नहुने बताएका छन् ।
“पार्टी भित्र अन्तरसंघर्ष चलेको चाँही हो । त्यहाँ सहि र गलतको बीचमा हामीले पार्टी एकताको बेलामा निर्धारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हो ।तर व्यक्तिवादी तरिकाले गुटबादी तरिकाले पार्टी चलेकै हो । तर त्यो पार्टीभित्रकै संघर्ष थियो । त्यो पार्टी भित्रको संघर्षलाई देशमा राजनीतिक संकट ल्याउने हठसम्म गएर इतिहासमा प्रतिगमनको बाहक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर मैले के भन्ने गरेको छु भने केपी ओली चाँही पराजित हुनुभो इतिहासबाट । उहाँ कलंकित हुनभो, उहाँले कलंकको टिका लगाउनु भयो । हाम्रो फेरी एकपटक विजय अभियानको शुरुवात भयो ।”………. उनले भने ।
प्रकाशित मिति १३ पुष २०७७, सोमबार १३:४४